Safaaradda Soomaaliya ee Zambia oo dib loo dhisayo+sawirro. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Safaaradda Soomaaliya ee Zambia oo dib loo dhisayo+sawirro.
Safaaradda Soomaaliya ee Zambia oo dib loo dhisayo+sawirro.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Zambiya oo ay Hor kaceyso Danjiraha Soomaaliya ee dalkaasi Marwo Xaawa Xasan Maxamed ayaa dhagax dhigtey Xarunta safaaradda oo dib udhis ballaaran lagu sameynayo mashruucaasi oo ay iska kaashanayaan dhammaan jaaliyadda .
Mashruucan ayaa ah mid is xilqaan ah oo jaaliyadda Soomaliyeed ee Zambia ay go’aansadeen in safaaradooda dib u dayac tir ugu sameeyaan si ay bilicda safaaradaha dalalka shisheeye ay ku leeyihiin dalkaasi ay ula mid noqoto.
Hirgalinta mashruucan waxaa kaalin weyn ka qaatey guddoonka Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Zambia ee uu hormuud u yahey goddoomiyaha Jaaliyadda, Mudane Maxamuud Hiiraan iyo dhammaan Jaaliyada qeybaheeda kala duwan.
Maxamuud Maxamed Hiiraan oo ah Guddoomiya Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Zambia ayaa sheegey in Jaaliyadda ay go,aansatey in sharafta iyo karaamada dowladnimo iyo shacabkeeda dartiisa ay si isxilqaan ah uga dhisaan safaaradooda.
Dhinaca kale waxaa lagu soo bandhigay naqshada safaaradda laga dhigayo oo ah mid casri ah waxaana Marwo Xaawa Xasan Maxamed safiirka dowladda Soomaaliyeed ee dalka Zambiya ugu mahadcelisey go,aanka Jaaliyadda ay sida is xilqaanka ah ay ugu dayactiraya Safaaradooda.
Previous articleMadaweyne Farmaajo oo Ra’iisul wasaaraha magacaaban horgeynaya Golaha Shacabka.
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo Golaha shacabka ka codsaday kalsooni siinta Ra’iisul wasaaraha.